Readymade Mapofu Factory | China Readymade Mapofu Vagadziri uye Vanotengesa
Roller blinds: Fabric Roller blinds anova anozivikanwa zvakanyanya munyika ikozvino yekushongedza hwindo. Tora zvakanakira nyore nyore kushanda, nyore maitiro, kusingaperi kusarudzwa kwemachira. Vanhu vanosarudza maRoller mapofu zvakanyanya uye zvakanyanya zvekushongedza. Readymade roller blinds inopa yakazara yakazara yezvinhu zvine hukama uye micheka, mutengi anogona kuvhura nekuisa iyo DIY. Easy kuisa uye nyore kuchinja. Roller blinds Basa: Roller blinds anokwanisika, anoshanda uye anoshanda akasiyana siyana ewindo bofu mhinduro ...
Isu tinoburitsa akasiyana evenitians mapofu. Type: ● Wood veVenetians Blinds, Bamboo Venetian Mapofu ● PVC Faux Wood Venetian Mapofu ● Aluminium Venetian Mapofu Kune marudzi akasiyana ehurongwa anokodzera evenetian mapofu anoshandisa: ● Cord System ● Chain System ● Mota System yeVenetian blinds, dzimwe nguva inozivikanwa se slat blinds. kana maziso akatwasuka, gadzira yakanaka kumachira uye inogadzira kutaridzika uye kwechizvino kutaridzika mukati meimba yako. Tine huwandu hwakanaka hwemapuranga evenetian mapofu, aluminium vene ...
Vertical Mapofu ndiwo akanyanya tsika yekuvhara hwindo zvigadzirwa. Yayo ine basa rekutsvaira kupenya uye kugadzirisa. Kubva pane akasiyana ekugadzira machira machira, Vertical Mapofu ndiwo akasarudzika sarudzo uye nyore kutarisana nechido chako. Chishongedzo: 100% Polyester Upamhi: 89/100 / 127mm Vane Sisitimu: Chain / Wand System Fabric Dhiza: Plain, Jacquard, Blackout, FR .. Aluminium: Nyembesi, Chikamu, Yakakwira, Yakatsetseka Yedu inomira mapofu mapofu. Vanobatsira kuchengetedza kuvanzika, kutonga kupisa, uye kumira ...
Zebra bofu inopa kuvanzika uye inowedzera fashoni kune chero nzvimbo. ita kunge yakawanda fashoni mune yezuva-shading indasitiri sezvo ichiwedzera yakanyanya nyore fashoni kune hwindo, nyore kushanda, nyore kupukuta. Kwete isu chete tinokurudzira mafashoni uye zano pane machira, isu tinoteedzawo zvakanyanya maitiro epasi rose ekudzivirira kwehutano kune zvigadzirwa zvemachira. ETEX inogadzira anopfuura zana zvigadzirwa zvemicheka mitsva uye yakakwirira mafashoni maficha. ● Kuumbwa: 100% polyester kana PVC Zuva rezdra zebra ● Kubata: Acosterone Acid ● ...
Roman Mapofu akafuridzirwa neakapfava ekupa machira ayo anowedzera kupfava uye kudziya kunzwa kwemavara emucheka emakamuri. ● Sistimu: Cord / Wand Kudzora Sistimu ● Muenzaniso: Plaini, Jacquard, Kuvhara, Blackout, Translucent, Sheer, Machira-moto machira . Kunyangwe iwe uchida tsika yemhando yekicheni, kana yamaruva yakarongedzwa roman blinds kuimba yekutandarira, Yakanakira kudzora zuva ...